Wararka | Radio Himilo | Page 3
Home / Wararka (page 3)
Dameero Xabsiga loo dhigay cunista caleemo qaali ah.
radio himilo November 29, 2017
Muqdisho – Milkiilaha dameero ku nool Hindiya ayaa la yaab sunniyaha la taagay markii loo sheegay in boolisku ay xabsiga u taxaabeen dameeradiisa kadib markii ay cuneen caleemo. Kamlesh oo ku nool Utter Pradesh ayaa sheegay inuu u baxay raadinta ...
Gabar is dishay markii saaxiibkeed uu baahiyay sawiradeeda.
Muqdisho – Gabar ayaa gebi ahaanba dunida isaga quusatay markii saaxiibkeed uu sawirradeeda oo qaawan uu soo dhigay baraha bulshada, marka loo eego booliska Brazil. Booliska Nova Andradina ayaa sheegay inay sameeyeen baaritaan kadib markii 15-jir lagu magacaabo Karina Saifer Oliveira ...
Aqoon-is-weydaarsiga Sanadlaha ee Cilmi-baarista Soomaaliya oo la daah-furay.
radio himilo November 28, 2017
Muqdisho – Waxaa maanta furmay aqoon-is-weydaarsiga sanadlaha ee cilmi-baarista Soomaaliyeed oo uu soo qaban-qaabiyay Machadka Cilmi-baarista Soomaaliyeed. Kani waa sanadkii saddexaad oo Machadku uu qabto cilmi-baarista. Wuxuuna socon doonaa muddo saddex maalmood ah. Isaga oo qeyb ka ah Jaamacadda Muqdisho, ...
82 qofood oo mar qura ku Islaamay gudaha Nigeria.
Muqdisho – Munaasabad laba maalinle ah oo ay qabatay Akadeemiyadda Fidinta Dacwada Islaamka ee Nigeria ACADIP ayaa kusoo idlaatay guul kadib markii 82 qof oo Masiixi ah ay kusoo Muslimeen. “Taariikhdeenna dacwada aan wadnay muddo 23 sano ah waa markii ugu ...
radio himilo November 26, 2017
radio himilo November 25, 2017
radio himilo November 21, 2017
radio himilo November 20, 2017